‘ब्याचलर बन्टी’मा उकुसासँग अनमोलको मस्ती ! - Sagarmatha TV
‘ब्याचलर बन्टी’मा उकुसासँग अनमोलको मस्ती !
काठमाडौं । एकाथबाहेक पुराना अभिनेत्रीहरु चल्न छाडेपछि चलचित्र निर्माता तथा निर्माण कम्पनील आफ्ना नयाँ चलचित्रमा नयाँ नयाँ अनुहारलाई स्थान दिन थालेका छन् । यसरी नयाँ अनुहार अनुबन्धित गर्दा उनीहरुले एउटा पुरानो तथा चर्चित अनुहारलाई पनि अनुबन्धित गर्ने गरेका छन् ।
यसको पछाडि व्यावसायिक पाटो पनि जोडिएको हुनसक्छ । निर्माणाधिन चलचित्र ‘ब्याच्लर बन्टी’का लागि निर्माण पक्षले नव अभिनेत्री उकुसा गिरीलाई अनुबन्धित गरेको हो । उनको अपोजिटमा अहिलेका चर्चित स्टार अभिनेता अनमोल केसी रहनेछन् ।
त्यसो त हरेक फिल्ममा नयाँ हिरोइनसँग रोमान्स गर्दै आइरहेका अनमोल केसीको आठौं प्रोजेक्ट ‘ब्याचलर बन्टी’मा पनि नयाँ अभिनेत्रीसँगै रोमान्स गर्ने मौका पाएका छन् । मिस एसिया नेपाल (बेस्ट पसर्नालिटी), मिस एसिया (मिस ब्युटीफूल आइज), मिस एसिया २०१७ की विजेता समेत रहेकी उकुसा यही फिल्मबाट अभिनयमा डेब्यु गर्न लागेकी हुन् ।
हालै उकुसा र निर्माता सुदिप खड्काबीच औपचारिक सम्झौता भएको हो । दशैंपछि छायांकन शुरु हुने ‘ब्याचलर बन्टी’ लाई मिलन चाम्ले निर्देशन गर्दैछन् । कमेडी र लभस्टोरी जनरामा निर्माण हुने फिल्ममा अनमोलका अलावा बनिष तिमल्सेना ‘बन्टी’ को भूमिकामा देखिनेछन् ।
चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन यूरोपमा हुने निर्देशक चाम्सले बताए । महंगो लागतमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको प्रदर्शन मिति फागुन १७ गतेलाई तोकिएको छ । अनमोलले ‘ए मेरो हजुर ३’ पछि यो फिल्मको सुटिङ ज्वाइन गर्ने बताएका छन् ।